सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ? – ईमेची डटकम
Posted byईमेची डेक्स September 24, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुन तोलामा १ रुपैयाँले बढेको छ।सोमबार सुन तोलाको ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार १ सय रुपैयाँले बढेर ७१ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
असोज १ गते तोलाको ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन २ गते ६ सयले घटेर ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। ३ गते फेरि ३ सयले बढेर तोलाको ७१ हजार रुपैयाँमा कारबार भयो।फेरि ५ गते ३ सयले बढेर ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन ६ गते भने स्थिर रह्यो।
यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घट्ने र बढ्ने क्रममा छ।६ गते चाँदी तोलाको ८८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।आज अर्थात् असोज ७ गते चाँदीको मूल्य स्थिर छ।
एजेन्सी : फिफाको ‘प्लेअर अफ दी इअर’ २०१९ को पुरुषतर्फको उपाधि अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेसीले जितेका छन् । सोमबार राति इटालीमा आयोजित अवार्ड घोषणा कार्यक्रममा मेसीले उक्त उपाधि जितेका हुन् । मेसीले दुई प्रतिस्पर्धी क्रिस्टयानो रोनाल्डो र लिभरपुलका खेलाडी भर्जील भान डाइकलाई उछिन्दै यो उपाधि हात पारेका हुन् ।
मेसीले २०१८–२०१९ को सिजनमा बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि दिलाएका थिए । ५० खेल खेल्दा ५१ गोल गर्नुकासाथै २० गोलका लागि पास उपलब्ध गराएका थिए । ला लिगा र युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोलकर्तासमेत बनेका थिए । मेसी यो उपाधि सबैभन्दा धैरै जित्ने फुटबलर हुन् । उनीपछि पोर्चुगिज फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ५ पटक यो उपाधि जितेका छन् ।
Posted byईमेची डेक्स September 24, 2019 October 30, 2019 Posted inअर्थ